HABKA QUMMAN EE YAANYADA GOOSASHADA JIILAALKA: SIDA LOO SAMEEYO MACAANKA TAMAANDHAYNTA - BEER CAGAARAN
Tamaacada Jam: Habka ugu wanaagsan ee Tamaandhada
Maanta, yaanyada waa la jecel yahay lana aqoonsan yahay dhammaan cuntooyinka adduunka. In sida suxuunta oo kaliya ma waxaa loo isticmaalaa, sida ugu dhakhsaha badan oo aan la goostay. Marinades Tani, iyo pickles, yaanyada, kvass iyo vyalyat. Laakiin dadka oo dhan ma dhadhamin macaanka miraha cajiibka ah.
yaanyada cherry - 1 kg
sonkorta - 450 g
liin - 1 pc.
Badiyan - 1 xiddig
Si aad u samayso macaanka yaanyo, waa inaad marka hore u diyaariso yaanyada. Ka samee jeex jeexan iskutallaabta. Ku qabo tamaandhada biyo karkaraya daqiiqad, adigana si fudud ayaad u diidi kartaa.
Qaybi liin qeybtii, gooyaa nus dhan qeybaha kala badh oo leh dhumuc 5mm, iyada oo kan labaadna saaro mindhicirka (jiiska) iyo tuujin casiirka.
Meelaha wax lagu kariyo, ku rid tamaandhada leh dhir udgoon iyo liin, ku dar sonkorta. Karkari isku dar ah kuleylka hooseeya, kareyso marmar saacad ah. Ka tag macmacaanka ah maalin, dabool leh dabool.
Marka tamaandhada ka baxdo casiir, ku dar liin iyo karkariyo. Ka dib markii macaanka ka boogo, yareyso kulaylka iyo isku kari ilaa saacad, ku dar gelatin. Ku qoyn jelatin biyo qabow muddo saacad ah, ka dibna kala gooyo kulaylka yar.
Haddii aad jeceshahay suugada basbaaska ah, waxaad samayn kartaa adigoon lahayn jelatin. Malmalaado yaanyo waa diyaar. Isku faafi inta badan barmiilka laisugu shubay una soo rogaa.
Ma taqaanaa? Qarnigii sideedaad, qabiilooyinka Aztec waxay soo heleen yaanyada. Waxay bilaabeen inay beeraan warshad, iyaga oo ugu yeeray "berry weyn". Wadamada yurub, dhaqanku wuxuu ku dhacay bartamihii qarnigii 16aad.
Sida loo sameeyo macaanka casaan cas
Tamaandho - 1 kg
Pectin - 40 g
Sonkor - 1 kg
Casiirka liinta - 50 ml
Basil (la jarjarey ama la qalajiyey) - 4 tbsp. l
Tamaandhada iyo macaanka basil waa saxan fiican. Si aad u diyaariso, marka hore diirka tamaandhada, ka dibna ka saar miraha. Iska yaree tamaandhada xayeysiiska iyo meel hoose ee saxanka, oo aad karisaan.
Ku rid suxuunta dabka, soo saar wax ku karkariyo, ka dibna ku walaaq tobanka daqiiqo. Mash mass ee dhadhanka iyo ku dar basil jar jartey iyo liin macaan.
Isku qasmaan pectin leh sonkorta (250 g) saxan kale, walaaqaya isku dar ah dheriga karinta, ku dar qiyaasta pectin. Ka dib markii pectin la shiiday karkariyo, ku dar inta badan sonkorta. Karkari daqiiqado dheeri oo dab damiya, ka saar xumbada. Jamu wuxuu ku faafaa bangiyada wuxuuna xiraa daboolka.
Waa muhiim! Ayadoo ay jirto qadar badan oo caano ah, macaanka waa in la kariyo si loo sii dheeraado.
Kariska Tamaandhada Jam ee yaanyada Cagaaran
Waxaa laga yaabaa in la karinayo macaanka ee yaanyada cagaaran yaanay muuqan wax aan macquul ahayn, laakiin sidoo kale waa dhadhan iyo udgoon.
Yaanyada Cagaaran - 1.5 kg
Sonkor - 1.3 kg
Biyo - 200 ml
Citric acid - 2 g
Tamaandho jarjar yar yar, ku rid digsi. In baaquli gaar ah, sharoobada karkari biyaha iyo sonkorta. Buuxi tamaandhada leh sharoobada, ku dar fejiska iyo karkari kulaylka yar.
Sida ugu dhakhsaha badan ee uu u kaco, iska daa oo ha qaboobo. Kadibna ku celi marxaladda laba jeer. Tamaandhadu waxay noqon doontaa mid jilicsan oo sharoobada ayaa sii dari doonta. Qabooji macaanka, ku rid dhalooyinka nadiif ah oo ku duub.
Xiiso leh Dalka Spain, sannad walba xagaaga ee magaalada Bunol waxay ku qaataan fasax si sharaf leh. Booqdayaasha dalal kala duwan iyo marti-galiyeyaasha waddanku waxay diyaarinayaan dagaal la mid ah mirahaas.
Tamaandhada Cagaaran Cunto
Jam waxaa la diyaariyey ma aha oo keliya casaan iyo cagaaran, laakiin sidoo kale yaanyada jaalaha ah, iskuday qaacidadan.
yaanyada - 500 g
sonkorta cad - 300 g
sonkorta qallalan - 200 g
biyaha - 150 ml
Yaanyada yaryar ku dar jeexan yaryar, ka saar jilbaha ka soo baxa liinta iyo tuujin juuska. Ku dar dhamaan walxaha ku jira makiinada wax lagu karsado, ku shub sonkorta caadiga ah, karkarinta, karkari 10 daqiiqo oo kale.
Ka qaad kuleylka oo u ogolow inuu si buuxda u qaboojiyo. Ku celi nidaamka. Kadibna ku dar sonkorta geela, isku kari kari ilaa shan daqiiqo. U soo wareeji bangiyada oo isku xidha.
Digniin! Ha ilaawin inaad nadiifiso labada dhalooyinka iyo daboolka, haddii kale macmacu wuxuu "ciyaari doonaa", lakabka sare ayaa lagu dabooli doonaa caaryaal.
Sida loo karsado yaanyo macaanka leh liinta iyo liinta
Tamaandho yaryar sida ku xusan qashinka soo socda waxay kaa yaabin doontaa qoraalka liinta quruxda leh.
Nus nus liin
Gingerbill Ground - 0.5 tsp.
Qoraxda - 0.5 tsp.
Sonkorta - 800 g
Biyaha - 100 ml
Ku dhaq yaanyada iyo diirka. Ku rid dheriga karinta, ku dar miir khafiif ah liinta iyo liinta iyo liinta.
In baaquli kale, isku walaaq sonkorta, qorfe, rinjiga iyo biyaha, si tartiib ah kareyso, isku kari ah. Shub sharoobada loo diyaariyey yaanyada. Karsado saacad kuleylka hooseeya, kareyso marmar. Waqtiga karintu wuxuu ku xiran yahay dhumucda la rabo ee alaabta. Ku rid macaanka la dhammeeyey ee dhalooyinka iyo xir daboolka.
Haddii aan iska dhigno waxyaabo nacayb ah oo ku saabsan tamaandho yaryar, waxaad si weyn u buuxin kartaa kaydka xilliga qaboobaha adoo isticmaalaya cuntooyinka aan caadiga ahayn.
Arrimaha cuntooyinka! Miyuu suurtagal yahay in fardaha la siiyo caruurnimada bakaylaha iyo sida loo sameeyo si sax ah?
Miracle Spade-Mug: Noocyada iyo Faa'iidooyinka isticmaalka qalabka beerta
Talooyin loogu talagalay daryeelka iyo geed-geedeedka
Kala duwanaanshaha Shiinaha ee Hope Yellowpies waxaa lagu talinayaa beerista jawiga adag.
Xajka caadiga ah ma aha mid aad u fudud! Guryaha dawooyinka ee cawska qoryaha, cuntada sida caadiga ah ee daawada
Kalluumeeyayaasha oo dhan adduunka oo dhan waxay xiiseynayaan digaagga oo qaadi kara ukunta leh qolof madow. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa Legbar taranka. Shakhsiyaadka waxaa soo jiidanaya labadaba dibadda asalka ah iyo ukunta buluuga ah ee cajiibka ah. Noocyada ayaa ku guulaystay adduunka oo dhan sababtoo ah dayactir hooseeya iyo sifooyinka sare ee iswaafajinta. Read More
Tilmaanta, ka hortagga iyo daaweynta cudurrada waaweyn ee asparagus
Cunto hilibka (hilibka bakaylaha): Cuntada ama maaha, ka badan faa'iido leh, waxa la isku daro